နိုငျငံတျောစီမံအုပျခြုပျရေးကောငျစီဥက်ကဋ်ဌ၊ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ ဦးဆောငျသညျ့ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံမှ ပွနျလညျရောကျရှိ » ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ
နိုငျငံတျောစီမံအုပျခြုပျရေး ကောငျစီဥက်ကဋ်ဌ၊ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ ဦးဆောငျသညျ့ ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့ဝငျမြားသညျ ယနေ့ ဒသေစံတျောခြိနျညနပေိုငျးတှငျ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံ၊ Novosibirskမွို့၊ Tolmachevo လဆေိပျမှ ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံတျောသို့ အပွညျပွညျဆိုငျရာ မွနျမာလကွေောငျး(MAI)မှအထူးလယောဉျဖွငျ့ ပွနျလညျထှကျခှာရာ Siberian ဒသေ ဒုတိယအုပျခြုပျရေးမှူး Mr. Petuhov Yuri Frogravich၊ Higher Military Command School ကြောငျးအုပျကွီး၊ တပျမ ၄၁ ယာယီတပျမမှူးနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြား၊ ရုရှား နိုငျငံဆိုငျရာ မွနျမာနိုငျငံသံရုံးမှ သံရုံးယာယီတာဝနျခံ ဦးဇျောလငျးဦး၊ စဈသံမှူး ဗိုလျမှူး ခြုပျ ကြျောစိုးမိုးနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြားက လဆေိပျတှငျ လိုကျလံပို့ဆောငျနှုတျဆကျကွ သညျ။
နိုငျငံတျောစီမံအုပျခြုပျရေး ကောငျစီဥက်ကဋ်ဌ၊ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ နှငျ့အတူ ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့ဝငျမြားအဖွဈ လိုကျပါသှားကွသညျ့ နိုငျငံတျောစီမံ အုပျခြုပျရေးကောငျစီဝငျ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး မိုးမွငျ့ထှနျး၊ ကောငျစီတှဲဖကျအတှငျး ရေးမှူး ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျကွီး ရဲဝငျးဦး၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ရေ) ဗိုလျခြုပျကွီး မိုးအောငျ၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံးမှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား၊ နပွေညျတျောကောငျစီဥက်ကဋ်ဌ မွို့တျောဝနျ ဒေါကျတာ မောငျမောငျနိုငျ၊ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုနှငျ့ နိုငျငံခွားစီးပှားဆကျသှယျရေး ဝနျကွီးဌာန၊ ဒုတိယဝနျကွီး ဦးသနျးအောငျကြျောနှငျ့ မွနျမာ့တပျမတျောမှ ထူးခြှနျဆုရ အရာရှိမြား၊ စဈဘကျ၊ နယျဘကျမှ တာဝနျရှိသူမြား ပွနျလညျလိုကျပါလာခဲ့ကွသညျ။
ခရီးစဉျအတှငျး (၉)ကွိမျမွောကျ နိုငျငံတကာလုံခွုံရေးဆိုငျရာညီလာခံ(MCIS-2021)သို့ ပါဝငျတကျရောကျဆှေးနှေးခွငျး၊ စဈဘကျ၊ အရပျဘကျမှ တာဝနျရှိသူမြားနှငျ့ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးခွငျးတို့အပွငျ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံရှိ အထငျကရနရောမြား၊ တက်ကသိုလျမြားနှငျ့ စကျရုံ၊ အလုပျရုံမြားသို့ သှားရောကျလလေ့ာခဲ့ကွပွီး နှဈနိုငျငံ အစိုးရနှငျ့ တပျမတျောနှဈရပျအကွား ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုနှငျ့ စဈဘကျနညျးပညာဆိုငျရာ ကဏ်ဍ၊ သိပ်ပံနှငျ့နညျးပညာကဏ်ဍ၊ သုတသေနလုပျငနျးကဏ်ဍ၊ လူစှမျးအားအရငျး အမွဈဖှံ့ဖွိုး တိုးတကျရေးကဏ်ဍနှငျ့ ယဉျကြေးမှုကဏ်ဍတို့တှငျ ပိုမိုတိုးတကျခိုငျမာအောငျ ဆှေးနှေး ဆောငျရှကျနိုငျခဲ့သညျ။
ထို့နောကျ နိုငျငံတျောစီမံအုပျခြုပျရေး ကောငျစီဥက်ကဋ်ဌ၊ တပျမတျောကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျ ဉီးဆောငျသညျ့ ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့သညျ မွနျမာစံတျောခြိနျ ယနညေ့ ၁၁ နာရီခနျ့တှငျ နပွေညျတျောတပျမတျောလဆေိပျသို့ ပွနျလညျရောကျရှိကွရာ ကောငျစီ ဒုတိယဥက်ကဋ်ဌ၊ ဒုတိယ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဉီးစီးခြုပျ(ကွညျး) ဒုတိယဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျး၊ ကောငျစီဝငျမြား၊ ပွညျထောငျစုဝနျကွီးမြား၊ ကာကှယျ ရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား၊ နပွေညျတျောတိုငျးစဈဌာနခြုပျ တိုငျးမှူး၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E.Mr. Nikolay A.Listopadovနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြားက လဆေိပျ၌ ကွိုဆိုနှုတျဆကျခဲ့ကွသညျ။
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိ
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များသည် ယနေ့ ဒေသစံတော်ချိန်ညနေပိုင်းတွင် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၊ Novosibirskမြို့၊ Tolmachevo လေဆိပ်မှ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်သို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာလေကြောင်း(MAI)မှအထူးလေယာဉ်ဖြင့် ပြန်လည်ထွက်ခွာရာ Siberian ဒေသ ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Mr. Petuhov Yuri Frogravich၊ Higher Military Command School ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ တပ်မ ၄၁ ယာယီတပ်မမှူးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ ရုရှား နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံသံရုံးမှ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံ ဦးဇော်လင်းဦး၊ စစ်သံမှူး ဗိုလ်မှူး ချုပ် ကျော်စိုးမိုးနှင့် တာဝန်ရှိသူများက လေဆိပ်တွင် လိုက်လံပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ကြ သည်။
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် နှင့်အတူ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် လိုက်ပါသွားကြသည့် နိုင်ငံတော်စီမံ အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဝင် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မိုးမြင့်ထွန်း၊ ကောင်စီတွဲဖက်အတွင်း ရေးမှူး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲဝင်းဦး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မိုးအောင်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ မြို့တော်ဝန် ဒေါက်တာ မောင်မောင်နိုင်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးသန်းအောင်ကျော်နှင့် မြန်မာ့တပ်မတော်မှ ထူးချွန်ဆုရ အရာရှိများ၊ စစ်ဘက်၊ နယ်ဘက်မှ တာဝန်ရှိသူများ ပြန်လည်လိုက်ပါလာခဲ့ကြသည်။
ခရီးစဉ်အတွင်း (၉)ကြိမ်မြောက် နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာညီလာခံ(MCIS-2021)သို့ ပါဝင်တက်ရောက်ဆွေးနွေးခြင်း၊ စစ်ဘက်၊ အရပ်ဘက်မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းတို့အပြင် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံရှိ အထင်ကရနေရာများ၊ တက္ကသိုလ်များနှင့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများသို့ သွားရောက်လေ့လာခဲ့ကြပြီး နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရနှင့် တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် စစ်ဘက်နည်းပညာဆိုင်ရာ ကဏ္ဍ၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာကဏ္ဍ၊ သုတေသနလုပ်ငန်းကဏ္ဍ၊ လူစွမ်းအားအရင်း အမြစ်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးကဏ္ဍနှင့် ယဉ်ကျေးမှုကဏ္ဍတို့တွင် ပိုမိုတိုးတက်ခိုင်မာအောင် ဆွေးနွေး ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဉီးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် မြန်မာစံတော်ချိန် ယနေ့ည ၁၁ နာရီခန့်တွင် နေပြည်တော်တပ်မတော်လေဆိပ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိကြရာ ကောင်စီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဉီးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း၊ ကောင်စီဝင်များ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ၊ ကာကွယ် ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Nikolay A.Listopadovနှင့် တာဝန်ရှိသူများက လေဆိပ်၌ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြသည်။